Wax ka ogow dadka ugu hilib cunista badan caalamka! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Wax ka ogow dadka ugu hilib cunista badan caalamka!
Wax ka ogow dadka ugu hilib cunista badan caalamka!
Himilo FM –Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dad badan oo ballan ku qaadaya inay yareynayaan cunista hilibka ama gebi ahaanba joojinayaan. Tani waxay qeyb ka tahay dadaal qofka uu ku doonayo inuu ku noqdo qof caafimaad qaba.
Waxaa si guud loo ogyahay in isticmaalka hilibka kordhay caalamka oo dhan 50-kii sanno ee la soo dhaafay. Wax soo saarka hilibka ayaa maanta 5 jeer ka badan heerka uu ahaa lixdameeyadii iyadoo la soo saari jiray 70 Milyan oo tan hase ahaatee sannadkii 2017 waxa uu ahaa 330 Milyan oo tan.
Tan iyo xilligaasi, waxaa laba jibaarmay tirada dadka caalamka. Horraantii lixdameeyadii, dadka dunida waxay ahaayeen 3 Bilyan oo qofood balse maanta waa inka badan 7.6 Bilyan.
Sababaha ugu weyn ee isticmaalka badan ee hilibka waa in dakhliga dadku kordhay iyo inay jiraan dad loo baahan yahay in lagu quudiyo.
Marka la fiiriyo dalalka caalamka, dal kasta oo dhaqaale xooggan dadkiisu way ka hilib cunis badan yihiin dadka kale.
Sannadkii 2013, Mareykanka iyo Australia ayaa soo galay kaalmaha ugu horreeya ee hilib cunista, waxaa soo raacay dalalka New Zealand iyo Argentina.
Baaritaano badan ayaa muujiyay in dadka reer galbeedka yihiin kuwa ugu badan ee cunna hilibka iyadoo qofka uu isticmaalo 80 illaa 90 Kiilo. Dhanka kale dalalka saboolka ah ayaa ah kuwa ugu hooseeyay xagga hilib cunista.
Previous: Man United oo go’aamisay qiimaha la siin doono tababaraha xigga ee kooxda
Next: Mbappe “Ma ahan in aan ka welwelno maqnaanshiyaha Neymar.”